भारत – भगवान को हाथ मा मायालु मोती | Lost Sheep for Christ
भारतको जनतालाई भगवानको प्रेम
आरोन जोसेफ पल ह्याकेट (ओपी) | शुभ समाचार | १ १ / १ //२०२०
मेरा भाइ-बहिनीहरू भारतको महान देशका। प्रभु तपाईंको परमेश्वर, आकाश र पृथ्वी को निर्माता, तपाईं सबै आफ्नो अनन्त प्रेम पठाउन! तपाईं सबै 1.353 अरब![i] एक, साँचो भगवानले भारतका मानिसहरूलाई आशिष दिईएको छ र तपाईं सबै उनका लागि विशेष हुनुहुन्छ। तपाईं मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, के उहाँलाई अरू भिन्न बनाउँछन् कि अन्य देवताहरू, जुन हामीले पूजा गर्छौं? भाइहरु, ब्रह्माण्ड मा अरु कुनै चीज छैन अनन्त भगवान संग तुलना गर्न सक्छन्। उही परमेश्वर जसले प्रत्येक मानवमा प्राकृतिक नियम लेख्नुहुन्छ,[ii] भारतका मानिसहरू हो, भगवानको मर्यादामा सहभागी हुनुहोस् किनकि तपाईं उहाँकै स्वरूपमा गठन हुनुभएको छ। विश्वले भारतलाई, गरिब, बढी मूल्या rated्कन गरिएको देशको रूपमा लेख्न सक्छ। ब्रह्माण्डमा भएका सबै प्राणीहरूसँग बाँड्नको लागि परमेश्वरको अनुग्रह पर्याप्त छ, र उहाँको विशेष ग्रेसहरू छन्, जुन भारतका बच्चाहरूको लागि हो!
प्रचारक लूकाबाट येशू ख्रीष्टको शिक्षाबाट[iii] , “यसपछि येशू बाहिर जानुभयो, र कर-संग्रहकर्तालाई, जकरियाको कर उठाउने मानिस, जसलाई कर कार्यालयमा बसिरहेको थियो, देखें; उसले येशूलाई भने, “मेरो पछि लाग।” र उहाँले बाँकी सबै, र उठेर उहाँको पछि लागे। र लेवी उसलाई आफ्नो घरमा ठूलो भोज गरे; त्यहाँ कर उठाउनेहरू र अरूहरू पनि टेबलमा बसिरहेका थिए। फरिसीहरू र तिनीहरूका व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले उहाँको चेलाहरूको विरुद्ध यसो भन्दै गनगनाउन लागे, “तिमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूसित किन खान पीन गर्छौ?” येशूले उत्तर दिनु भयो, “निरोगीलाई वैद्यको आवश्यक पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता पर्छ। म धार्मिक मानिसहरूलाई बोलाउनु आएको होइन, म त पापीहरूलाई तिनीहरूका हृदय र रहन सहन परिवर्तन गर भनी अह्राउनु यहाँ आएको हुँ। ” दया केवल यहूदी जनताका लागि मात्र होईन तर भारतका मानिसहरुका लागि पनि हो। भगवान छैन बस, को शिक्षित वा धनी प्रेम उहाँले, गरिब भोकाहरूलाई बिरामी र मरिरहेका प्रेम गर्नुहुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी सबैलाई सर्वशक्तिमान् भगवानको टेबलमा स्वागत छ। हामी सबै बिरामी छौं। केवल शारीरिक रोग मात्र होइन, तर बढी आध्यात्मिक! शैतान, सम्पूर्ण मानव जातिको दुश्मन, सबै प्राणले दुःख पाएको चाहन्छ! उहाँ भारतको देशलाई धेरै पुरस्कार दिनुहुन्छ। किन? किनकि उहाँ एक पतित सेराफिम परी हुनुहुन्छ, उनले भारतका पुरुष र महिलाहरूको प्राणको बहुमूल्य कुरा देख्दछन्। तपाईं “पवित्र मोती” सबैभन्दा शक्तिशाली ट्रिनिटीको हातमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कृपा स्वर्गबाट ​​तल आयो कि उहाँ यो आदेश आफ्नो छोरा, येशू ख्रीष्टको चेलालाई दिनुभयो। “एघारजना चेलाहरू गालील गए। येशूले भन्नुभएको डाँडामा तिनीहरू पुगे। र जब उनि देखे उसलाई तिनीहरूले उहाँलाई उपासना; तर केहि शंका गरे। Jesus came।।।।।। “।।।।।।।।।।।।।।।।। Came came came came came came came came came came came came came heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven स्वर्ग र पृथ्वीका सबै अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका मानिसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ। तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देओ। मैले दिएका आज्ञाहरू पालन गर्न सिकाओ। र हेर, म सधैं तपाईंसँग छु, युगको अन्तमा। ” [iv]
सीसीसी-१777 (क्याथोलिक चर्चको क्याटेकिजम) ” पवित्र आत्माको अनुग्रहमा हामीलाई धर्मीकरण गर्ने शक्ति छ, अर्थात् हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट शुद्ध पार्ने र हामीलाई” येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा परमेश्वरको धार्मिकता “सञ्चार गर्ने र बप्तिस्माको माध्यमबाट ” भारतले भारतलाई यति माया गर्थ्यो कि क्रूसमा मर्न र सम्पूर्ण मानव जातिको पाप धोइदिन उसले येशूलाई पठायो। एक, सोध्नुहोस् सक्छ किन All- छ जो एक परमेश्वर, थियो शक्तिशाली, एक मानिस एक रूप मा आउन र मानवता को लागि मर्न? केहि मान्छे को लागी मर्नुहोस् जो उहाँ को केहि चिन्न छैन? “तर यदि हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौं भने, हामी विश्वास गर्छौं कि हामी उहाँसँगै बाँच्नेछौं। हामी जान्दछौं कि ख्रीष्ट मृत्युबाट जाग्नु भयो। अनि उहाँ फेरि कहिल्यै मर्नु हुनेछैन। उहाँमाथि मृत्युको कुनै प्रभाव छैन। उहाँ मर्नुभएको मृत्यु उहाँ एकै पटक पापको लागि मर्नुभयो, तर उहाँ जुन जीवन जिउनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरमा बाँचनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले पनि आफूलाई पापको लागि मरेको र ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित ठान्नुहुन्छ। ” सृष्टिकर्ताले आफ्नो प्राणीलाई दिने सबैभन्दा ठूलो उपहार प्रेम हो, त्यसैले हामी उहाँसित एकतामा भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। सेन्ट थॉमस अक्विनसले यस लेखको गहिरो प्रश्नको जवाफ दिए, उनी सुमा थिओलिका फ्रिस्ट भाग, प्रश्न २० अनुच्छेद १ “ मैले जवाफ दिएँ, परमेश्वरमा प्रेम छ भन्ने कुरा हामीले नितान्त आवश्यक छ: किनकि प्रेम इच्छाशक्तिको पहिलो आन्दोलन हो र हरेक आवेगको संकाय किनकि इच्छाशक्तिका कार्यहरू र सबै भूतपूर्व संकायको लागि उचित र खराबमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ, उनीहरूको उचित वस्तुहरू जस्तै: र किनकि राम्रो चाहिन्छ अनि विशेष गरी इच्छा र भोकको वस्तु हो, जबकि दुष्ट मात्र दोस्रो र अप्रत्यक्ष रूपमा वस्तु हो, राम्रोको विपरीत; यो अनुसरण गर्दछ कि राम्रो काम गर्ने इच्छा र भोक को कार्य स्वाभाविक रूपमा खराब मान्नु भन्दा पहिले हुनु पर्छ; यस प्रकार, उदाहरणका लागि, खुशी दु: ख भन्दा अघि हो, घृणा गर्न प्रेम: किनकि आफैंको जो अस्तित्व हुन्छ सँधै अर्कोको मार्फत रहेको भन्दा पहिले नै हुन्छ। “
परमेश्वरको स्वभाव संसारमा उसका सबै बच्चाहरू बीटिफाइट भिजनमा उहाँसँग एक हुनको लागि इच्छा देखाउँनु हो। सत्यको आत्मा, भारतको बच्चाहरु, तिम्रा पापहरु पखाल्न चाहन्छ, किनकि एक बुबाले आफ्ना बच्चाहरुको रक्षा, हेरचाह र हेरचाह गर्न को लागी केहि गर्नेछ, त्यसैले स्वर्गमा हुनुहुने तपाईका स्वर्गमा हुनुहुने पिता तपाईहरु लाई अँगाल्न तयार हुनुहुन्छ! भारतका बच्चाहरूका लागि दुई भँगेराको जीवन मूल्यवान छ। परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता र पुत्रको बीचमा उत्पन्न भएको प्रेम हो। सृष्टिको पानीमा हिर्काएको यही आत्मा[v] , उही आत्मा हुनुहुन्छ जसले सबैलाई जीवनको सास दिन्छ। यो भएन कुरा तपाईं गोवा मा जन्मिए थिए सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो वा ट्याक्सी चालक हुन् पंजाब देखि, सबैलाई परमेश्वरको ठूलो राम्रो लागि, यो संसारमा ल्याएको थियो। Because किनभने हामी मरेका छौं वा कम्तिमा पापले घाइते भएका छौं, प्रेमको वरदानको पहिलो प्रभाव भनेको हाम्रो पापको क्षमा हो। चर्चमा पवित्र आत्माको परिवर्तनले पापद्वारा हराएको बप्तिस्मा गरिएको ईश्वरीय समानताको पुन: स्थापना गर्दछ। “[vi]
गंगाको पानी सबै भारतीयहरूको लागि पवित्र मानिन्छ, तर मैले भनेको पानी, जीवनले बचाउने पानी हो जुन ख्रीष्टले तपाईं सबैलाई दिनुभयो। जब गुरुले आफ्नो हात पानीमा डुबाउनुहुन्छ र तपाईंको टाउकोमा राख्नुहुन्छ, तब उसले आफ्ना पवित्र शब्दहरू दोहोर्याउँछ “म तिमीलाई बप्तिस्मा दिन्छु, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा”[vii] तपाई, सर्वोच्च-बच्चाहरुका बच्चाहरु, अब तपाईको विवाह भोजमा तपाईलाई स्वागत छ। मास्टर तपाईं संग आफ्नो शरीर र रगत साझा गर्न चाहन्छ। अनन्त जीवन पाउन र परमेश्वरको असीम महिमा हेर्न। मा लूका अध्याय 10: पद 33-37 येशू ख्रीष्टको कृपा आफ्नो सन्देश व्यवस्थाको एक विद्वान गर्न साझेदारी , “तर सामरी, उहाँले यात्रा रूपमा उहाँले कहाँ आए; जब उसले उसलाई देख्यो, ऊ त्यस मानिसलाई दया भयो। त्यसपछि यूसुफले आफ्नो बाबुलाई आफ्नै पशुमा राखे र उसलाई एउटा पौवामा लिएर गए, र उसको देखभाल गरे। अर्को दिन उसले दुइ दिनार निकाल्यो र तिनीहरूलाई इनारका मालिकलाई भन्यो, ‘उसको हेरविचार गर। र अरू जे जति खर्च गरे पनि म फर्किन्छु। ‘ यी तीन मध्ये कुनचाहिँ डाकूहरूको बीचमा परेको मान्छेको छिमेकी साबित भयो ? ” उसले भन्यो, “उसलाई दया गर्ने मानिस।” येशूले भन्नुभयो, “तिमी पनि जाऊ अनि यस्तै गर।” विश्वका अन्य भागहरूमा आशा ल्याउनको लागि ईश्वरले भारतका मानिसहरूलाई ज्ञानका साथ आशिष्‌ दिनुभयो। मेडिकल टेक्नोलोजीमा तपाईंको प्रगति र डाक्टरहरूको उच्च मागसहित नर्सहरू, तपाईं आफ्नो परिवारलाई पछाडि छोड्नुहुन्छ, तपाईंको पुरानो जीवन शैली पछाडि। एक साधारण “पेचेक” को लागी मात्र होईन किनकि तपाईं खाँचोमा परेकाहरूलाई माया गर्न, बिरामीको हेरचाह गर्ने र एक्लो महसुस गर्ने आरामका लागि चाहानुहुन्छ। जसरी येशूले आफैं भन्नुभएको थियो “किनकि म भोकाएको थिएँ र तिमीले मलाई खाना दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीले मलाई पियौ, म परदेशी थिएँ र तिमीले मलाई स्वागत गर्यौ, म ना naked्गो थिएँ र तिमीले मलाई लुगा लगायौ, म बिरामी थिएँ र तिमीले मलाई भेट्यौ, म जेलमा थियो र तिमी म भएको थियो। ‘ “तब धार्मिक मानिसहरूले जवाफ दिनेछन्, ‘परमप्रभु, हामीले तपाईंलाई कहिले भोकाएको देख्यौं र हामीले भोजन दियौं र कहिले तिर्खाएको देख्यौं र हामीले पानी पिउन दियौं? हामीले तपाईंलाई कहिले एक्लो घरदेखि टाढो देख्यौं र तपाईंलाई स्वागत गर्यौ वा लुगा लगायौं? हामीले तपाईंलाई कहिले बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौं र तपाईंलाई भेट्यौं? ‘ अनि राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, ‘साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्छु, जसरी यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई तिमीहरूले गरेका थियौ, तैंले मलाई त्यो गरिस्।’ [viii]
भाइहरू, म नम्र हुँ तपाईंलाई मालिकको टेबलको भोजमा निम्तो दिन्छु। मलाई धुलो बाटोबाट खुट्टा धुने अनुमति दिनुहोस् , तपाईंको काँधबाट घडी लिनुहोस् र तपाईंको हात र अनुहार धुनुहोस्को लागि तपाईंलाई एक प्याला तातो पानी दिनुहोस्। मलाई उसको दासलाई टेबुलमा बस्न दिनुहोस् र उत्तम फलफूल र रोटीहरू खान दिनुहोस्। तपाईं सबै उहाँको भोजमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ। एउटा चीज जुन भगवानले साँच्चै चाहानुहुन्छ, तपाईको हृदयलाई पूर्ण रूपमा उसलाई दिनुहुन्छ। उसको बगालको गोठालाले तपाईंलाई बप्तिस्मा दिने अनुमति दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईंलाई पवित्र तेलले अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईंको पापहरूको पश्चात्ताप गर्नुहोस् र उहाँको, पवित्र र अपोस्टोलिक चर्चको साथ पूर्ण कुराकानीमा रहनुहोस्। केवल ख्रीष्ट येशूमा, सबै नामहरूमा नाम, एक हो जसले हामीलाई शैतानको जोखिमबाट जोगाउन र अनन्त जीवनको लागि ल्याउन सक्छ। प्रार्थना गरौं,
अनन्त र कहिल्यै जीवित परमेश्वर, तपाईं यो विशाल सिर्जना ब्रह्माण्ड र छोराछोरीलाई स्थानहरूलाई तदनुसार पृथ्वीमा। तपाईंले भारतका मानिसहरूलाई प्रेम, दर्शन, र विज्ञानको ठूलो ज्ञानका साथ आशिष्‌ दिनुभयो। तपाईंले तिनीहरूलाई “संसारको रीढ़” को रूपमा छनौट गर्नुभयो प्रेम र मानवताको हेरचाहको लागि। यस देशमा तपाईंको प्रत्येक बच्चाको, तपाईंको सिर्जनामा ​​एक विशेष भूमिका खेल्दछ। तपाईंको सत्यको प्रकाशको साथ तिनीहरूलाई प्रतिबद्ध गर्नुहोस् र तपाईंको प्रेमको सत्यलाई पुन: जीवन दिनुहोस्, भारतमा प्रत्येक पुरुष, महिला र बच्चाहरूको हृदयमा। तिनीहरूलाई देखिने र नदेखिने कुराबाट दुष्टहरूबाट जोगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको पवित्र चर्चको माध्यमबाट पूर्ण प्रेम र प्रेममा ल्याउनुहोस्। यसको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौं, मेरी परमपिता परमात्मा र सेन्ट जोसेफकी आमा मरियमको बिन्तीबाट, उनको जीवनसाथीलाई प्रेतहरूको आतंक। यसमा हामी हाम्रा प्रभु परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछौं। आमेन।
भगवान धन्यबाद, भारतका बच्चाहरु,
आरोन जोसेफ पल ह्याकेट (ओपी)
[ii] CCC4364 क्याथोलिक चर्चको Catechism
[iii] लूका:: २-3–3२
[iv] मत्ती २:: १ 16-२०
[vi] क्याथोलिक चर्च ate3434 को क्याटेकिजम
[vii] मत्ती २:19: १।
[viii] मत्ती २:: 35 35-40०
← ند-مروارید دوست داشتنی در دست خدا
ဘုရားသခင့်လက်တော်၌အိန္ဒိယ – ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောပုလဲ →